AKHRISO : Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo Sheegay in Somalia ay Gashay Godkii Naarta (Akhriso Sababta) | Allbanaadir News	AKHRISO : Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo Sheegay in Somalia ay Gashay Godkii Naarta (Akhriso Sababta)
AKHRISO : Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo Sheegay in Somalia ay Gashay Godkii Naarta (Akhriso Sababta)
Hogaamiyaha Dib loo dhaariyey Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ka hadlay sababta wakhtiga dheer ay Soomaaliya dhibka iyo Halaaga ugu jirto xilli ay jiraan dhibaatooyin ay weli Soomaaliya ka jiraan.
Waxa Kenyatta uu sheegay in ay iyagu ku dedaaleen wax ka badelka Xaalada Soomaaliya oo Ciidan Naf hurayaal ah ugu deeqeen Sanadkii 2011 taasi oo la micno ah sida walaalnimada ay umuujiyeen iyo Derisnimada kala dhaxeysa.
Uhuru Kenyatta ayaa hoosta ka xariiqay inay Soomaaliya dib udhigeen Siyaasiyiin aan rabin in la gaaro Hormarka ay ku haminayaan 10-ka Milyan Ee Soomaalida ah.
Waxa uu sheegay in Siyaasiyiintaasi ay yihiin kuwo Danahooda gaarka ah ka fiirsada keliya,iyadoo uu warkiisa Kenyatta intaa ku daray inay jiraan Madax Shabaab la shaqeysa oo Argagaxisada ah.
Ilo wareed ay Heshay Shabakada Allbanaadir News ayaa tilmaamay in Kenyatta uu kala jeeday Warkaasi mid uu kaga golahaa taageero uu kaga raadsanaayo Shacabka Soomaaliyeed.